Handhuuraa: Herrega Qusannaa Daa’immanii - Oromia International Bank
Herrega qusannoo kana maatiin/guddiftoonni waliin yookaan qofa qofaa banuu ni danda’u.
Maqaan daa’imaa maqaa maatii/guddistotaatti aanee barreefamuu qaba.
Herregni qusannoo kun hanga umuriin daa’imaa ga’utti maatiidhaan/Guddistootaan socho’a.
Hanga umuriin daa’imaa herregicha sochoosuuf qaqqabutti herregicha Dabtara qusannoon socho’a.
Herrega qusannoo kanaaf kaardiin kaffaltii kamiyyuu hin qophaa’u.
Herrega kana yeroo banan kaffaltii malee banuu ni danda’u ta’us baatii tokko keessatti qusannoo jalqabuu qabu.
Yeroo barbaadanitti hanga maallaqa barbaadan baasuun ni danda’ama.
Daa’imni waggaa 18 yeroo guutuu herregichi guutummaatti gara maqaa isaatti jijjiiramee gara herrega qusannoo iddileetti ni jijjiirama.
Waggaa 18 booda daa’imni deggersa maatii ykn Guddistootaa malee herregicha sochoosuuf mirga qaba.